Podcast 13 × 03: Dhacdada Apple Sebtember 14 | Waxaan ka imid mac
Toddobaadkan waxaan la yaabnay "ama maya" martiqaadka munaasabadda Apple ee Sebtember, isla maalinta #podcastApple si toos ah. Dhacdadii shalay waxaan si dheer uga hadalnay wararka Apple ku bilaabi karto dhacdadan. Toddobaadku wuxuu mar hore ku bilaabmay dib -u -soo -noqnoqosho xanta ku saabsan soo -bandhigidda iyo taariikhda tan, ugu dambayntii waa la xaqiijiyay.
Hadda waa inaan sugnaa oo keliya maalmahan si aan u dhaafno illaa Talaadada 14 -ka si aan u aragno wararka Apple soo bandhigto, si kasta oo ay tahay xanta iyo daadku waxay ahaan doonaan joogto toddobaadkan. Hadda waxaan idinla wadaagaynaa qaybtii shalay, Talaadada soo socota waxaan si toos ah u baahin doonnaa soo bandhigista iPhone 13 iyo alaabta inteeda kale.
Kani waa iskuxiraha aad gali karto kanaalkeena YouTube iyo inaad nagala socon karto qeybta xigta tooska ama aad ugu raaxeysan karto Podcast-ka lagu daabacay iTunes waayo, ka dhagayso goorta iyo meesha aad rabto. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama soo-jeedin ah oo aad u maleyneyso inaan ka faalloon karno podcast-ka, waxaad ku noolaan kartaa adigoo toos u maraya sheekada laga heli karo YouTube-ka, adoo adeegsanaya hashtag #podcastapple on Twitter ama ka kanaalkayaga Telegram Waa in la ogaadaa inay bilaash u tahay qof walba anaguna aad iyo aad ayaan u badan nahay.
Mar labaadna waa inaan u mahadnaqnaa qof kasta oo ka soo qayb gala shirkaddaada qaan-gaarnimada adag, Dad badan oo adeegsadayaal ah ayaa si toos ah noola kulmaya waxaadna toos noo waydiinaysaa tikniyoolajiyadda xilligan ee Apple, alaabteeda iyo waliba mowduucyo kale oo aan toos ula xiriirin Apple. Kooxda waa run ahaantii farxad inaan wadaagno dhammaan waaya aragnimadeena oo aan barto taadaWaxaan rajeyneynaa in bulshadan adeegsadayaasha ah ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Podcast 13 × 03: Dhacdada Apple Sebtember 14
Apple TV + wuxuu ballaariyaa liisaska carruurta yaryar
AirPods 3 oo leh koronto bilaa wireless ah iyo kiiska lacag -bixinta oo bixiya 20% lacag dheeraad ah